Hay?adda waddooyinka Puntland ee NESHA oo dayactir ka wadda laamiga u dhaxeeyey Galkacyo iyo Cagaaran. – Radio Daljir
Galkacyo, Jan 25 ? Waxaa dayactir xooggani ka socdaa waddada laamiga ee isku xirta magaalooyinka waaweyn ee Puntland, gaar ahaan meelaha waddadu sida lixaadka leh ay uga burburtay.
Dayactirka waddada laamiga ah oo ay ku hawllan tahay hay?adda waddooyinka Puntland ee NESHA, ayaa dib u habayntii ugu danbaysay laga wadaa inta u dhaxaysa magaalada Galkacyo iyo deegaanka Beesha Cagaaran oo ka mid ah meelaha laamigu uu sida baaxadda weyn uga burburay.
Dhulka haatan ay hay?addu ka waddo dib u habaynta jidka laagmiga una dhaxeeya Galkacyo Cagaaran, ayaa dheerarkiisu dhan yahay illaa 30KM, waxaana shaqadaan oo bilaabatay muddo dhaw, illaa hadda ay hay?addu ku guulaystay dhammastirkiisa iyo dib u habayntiisa dhul dhan illaa 10KM, kaasi oo lagu soo celiyey sidii hore ee uu laamigu ahaa.
Mar idaacadda Daljir ay booqatay halka ay ka socoto shaqada dib u habaynta waddada laamiga gaar ahaan inta u dhaxaysa Galkacyo iyo Cagaaran ayaan la kulannay mas?uuliyiinta wadda shaqada kabidda laamiga oo uu ka mid yahay guddoomiyaha hay?adda jidadka Puntland ee NESHA C/risaad Burgal.
Xilliga aan booqanay goobta ayaa waxaa si xawli ah u socotay shaqada lagu dayactirayey laamiga, iyadoo ay shaqaynayeen gaadiid badan oo iskugu jiray Baaldoosarro, Ruullooyinka waddada sima iyo sidoo kaleeto mashiinnada daamurka karkariya, waxaana gacanta ku hayey shaqaale badan oo xirnaa dharka kulalaylka la iska xijiyo.
C/risaaq Burgal, oo ah guddoomiyaha hay?adda jidadka Puntland ee NESHA, ayaa waraysi uu siiyey idaacadda Daljir uga warbixiyey shaqada ay laamiga ka hayaan, wuxuuna xusay in ay dadaal muujiyeen intii tabartood ah, hase ahaatee ay jirto taag-darri dhaqaale oo hortaagan in ay helaan dhammaan agabyada loo baahan yahay in loo adeegsado dib u haybaynta waddooyinka.
Daryeelidda iyo dib u habaynta waddada laamiga ah ee hadda laga waddo inta udhaxaysa Galkacyo iyo Cagaaran, ayaa lagu soo simi doonaa illaa iyo Koontaroolka waqooyi ee magaalada, waxaana markaasi kadib loo tallaabsan doonaa dayactir kale oo lagu sameeyo laamiga dhaxmara magaalada Galkacyo sida uu idaacadda Daljir u xaqiijiyey guddoomiyaha hay?adda NESHA C/risaaq Burgal.
Waxaana dayactirka laamiga dhaxmara magaalada Galkacyo oo meelo badan ka burbursan iska kaashan doona hay?adda NESHA iyo maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo.
Sikastaba ha ahaatee laamiga isku xira magaalooyinka Puntland, ayaan helin wax daryeelid ah ama dayactir ah wixii ka danbeeyey xilligii la sameeyey, waxaana meelo badan ka soo wajahay burbur xooggan oo sababay meelaha qaar in la waayo muuqaalkii laamiga, waxaana waddada laamiga ahi ay ka mid tahay halbawlayaasha bulshada ku dhaqan deegaannada Puntland ee sahasha isku socodka dadka iyo gaadiidka kala gudbisanaya shixnadaha ganacsi iyo adeegyada kale ee muhiimka ah.